मंहगीले जीवन कहालीलाग्दो भयो । | मंहगीले जीवन कहालीलाग्दो भयो । – हिपमत
मंहगीले जीवन कहालीलाग्दो भयो ।
बजारमा कुनै पनि सामान छोइसक्नु छैन । सवै सामानहरुको दाम आकाशिएका छ । के विगत ७० बर्ष देखिको नेपालीको आन्दोलन यस्तै गरि जिवन जिउनका लागि हो । नेपालीहरु सयौ चाटी मर्दै बाच्दै गरिरहेका छन् । अहिले जताततै रोड जलिरहेको छ । आगो दन्किरहेको छ । धेरै विद्यँर्थी र आम उपभोक्ताको रोडको दिनचर्या भइरहेको छ । नेपालीले सुख र समृद्धि लागि धेरै पल्ट आन्दोलन गरे क्रान्त्ति गरे र सयौ वीरहरुले नेपाल र नेपालीहरुको खुसीको लागि हासी हासी वलिदानी गरे । यो माटोमा धेरै वीरहरुको रगत वगेको छ । तर आज देश चलाउनेहरु त्यही रगतमा होली खेलेर आफ्नो खराव अभिष्ट पुरा गर्न अहोरात्र लागि परेका छन् । आज धेरै नेपालीहरु नयां नेपालको परिकल्पनामा सपना देखिरहेका छन् ।
यहांको वर्तमान क्रियाकलापले शहिदरुको सपनाको अपमान गरेको जस्तो लाग्छ । नेपाली जनताले कहिले सम्म आन्दोलन र क्रान्त्ति गर्नु पर्ने हो यो अनुक्तरित प्रश्नले नागरिकलाई सताइरहेको छ । लाखौ युवाहरुको भविश्य खोलै खोला वगेर गईरहेको छ । देशको शासन व्यवस्था देखि दिक्क भएर लाखौ उर्जा्शिल युवाहरु अर्काको भूमिमा श्रम वेच्च वाध्य छन् । युवा वेगरको देशको विकासको कल्पना सम्म गर्न सकिदैन तर तिनै युवा हार गुहार गरेर अध्ययन छोडेर, श्रम गर्न छाडेर राडमा टायर वाल्न बाध्य छन् । टायर वाल्नु कसैको चाहना हैन, कसैको रहर हैन यो त नागरिक मारा सरकारको उपज हो । लाखौ नेपालीलाई विदेश पलायन गराउने राष्टघाती सरकारको परिणँम हो ।
लगातारको मंहगीले धैर्यवान र सोझा नेपालीको धैर्यताको बाध टुटिसकेको छ । सयौ गरिव निमुखा असहाय अशक्त विद्याँर्थी किसानका घरमा अध्यारोले छोपेको छ । मंहगीले नागरिकको ढाड भाचेको छ । अव त अति भएको छ कसलाई भन्छन् जनताले आफ्नो पिढा । संरक्षण गर्नु पर्ने सरकार पनि भक्षक भै सकेको छ । सरकारको यो निकृष्ट कार्यको चौतर्फी आलोचना भै रहेको छ । नागरिकको रोदन चित्कार र समस्या नसुन्ने सरकार पनि सरकार हुन सक्छ, यो त एउटन प्राइभेट संगठन जस्तो मात्र देखिन्छ । त्यसकारण सोझा नेपालीलाई अव यो मंहगी नामक रोगले स्वर्गबास गराउने संकेत देखिन्छ । मंहगीको परिणामले दर्दनाक, कहालीलाग्दो, त्रसिद र डरलाग्दो जिवन जिउन सम्भव छैन । यसरी धपक्कै अध्यारोले छोपिएको यो समय गरिव नागरिकको लागि मर्नु न बहुलाउनुको अवस्था वन्न गएको छ ।
दयनिय अवस्थामा रहेका हामी नेपाली कसरी यो मंहगी धान्न सक्छौ । उच्च वर्गका नागरिकलाई खासै असर नपर्ला तर हुदां मात्र खानेहरुले कसरी जीवन धान्ने ? देशका कुना कन्दरा गांउ वस्ती जहां विजुली छैन त्यहां मट्टितेल किनेर टुकी वाल्न समेत नसक्ने अवस्था छ । दशैमा सम्म चामलको दुई गास भात खान नसक्ने नेपालीलाई यो मंहगी कस्तो उपहार हो ? भनिन्छ “संसारमा सवैभन्दा ढुगो साह्रो त्यो भन्दा पनि नहुनु साह्रो ।” गरिवको सहारा कोही हुदैन र यस्तो तीव्र मंहगीको मारमा गरिव नेपाली नै पर्दछन् । नेता र राज्य शक्तिमा हाली मुहाली गर्नेलाई त के भो राजनितीको खोल आडेर सात पुस्ताको लागि आवश्यकता पुरा हुने गरी भेला पार्छन् । गरिवले सधै मरिरहने अवस्था छ भने धनीलाई अझ धनी बनिरहने अवस्था हाम्रो शासन पणालीले स्थापित गरिदिएको छ ।
जनताको सेवा गर्छु भनी कसम खाएर चुनाव जितेर गएका नेताहरु फेरी भूलेर पनि आउदैनन् र जसले चुनाव जिताएर पठाए तिनीहरुलाई चिन्दैनन् । नेपाली नेताहरुको अर्कण्यमताको परिणाम भोग्दै छन् नागरिकहरु । हाम्रो अहोभाग्य यहां एउटा पनि राजनेता जन्मन सकेनन् । यहां जनताको लागि त्याग तपस्या र वलिदान गर्ने एउटा पनि नेता छैनन् । सवै आफ्नो भूडी भर्नमा नै तल्लिन छन् । सवै व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त छन् मैले यसो भनि रहदा नेताज्यूहरुलाई अपमान हैन खवरदारी मात्र गरेको हुं । सवैले बुझने र सचेत हुने वेला आएको छ । देशमा कु तत्वहरुको प्रभाव रहेको प्रष्ट देखिन्छ । यो समस्या समाधान भयो भने त घुस खान पाईदैन, भ्रष्टाचार गर्न पाइदैन, मोजमस्ती गर्न पाइदैन । देशको अस्थिर राजनितीले महगीको क्यान्सर लगाएको छ ।
ओहोदामा वस्नेहरु नैतिक रुपमा सरम पचाएर वसेका छन् । राजनितीकर्मी र व्यापारीको मिलेमत्वमा किर्तिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य वढाएर नेता र व्यापारीको वोसो लगाउने कार्यले जनताको जीवन वर्वाद हुन गएको हो । जनताको धैयर्ताको सिमा टुटन लागेको छ । अव नेपाली जनताले धेरै सहन सक्ने स्थिती छैन । त्यसैले सरकारले तुरुन्त्त कुनै ठोस कदम चालेर महगी तुरुन्त्त नियन्त्रण गर्नु पर्छ ।
सरकारले यो महगीको विषयवस्तुलाई गम्भिरतापूर्वक लिन जरुरी छ । गरिव, विद्यार्थी र किसान आदी लाई अनुदान उपलब्ध गराई थोरै भए पनि राहतको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । मूल्यबृद्धिले नागरिकलाई पर्ने आर्थिक भार कम गराउन तर्फ विचार गर्नु पर्दछ । सरकारले हचुवाको भरमा नभइ वैज्ञानिक ढंगले बजारको नियन्त्रण र बस्तुहरुको मुल्य विर्धारण र समायोजन गर्न जरुरी छ । नागरिकले धेरै आशा गरेका के पी शर्मा ओली सरकारले पनि मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न सकेन भने अव भविस्यमा कुन सरकारले गर्दा भन्न सकिन्न । ओलीले कतिपय कार्यक्रममा जनताको जीवनस्तर उकास्ने, गरिवी नरहने सवै समृद्ध हुने कुरा गरेता पनि उनको वाचा र अपेक्षा अनुसार काम भएन र महगी र मूल्यबृद्धि पनि नियन्त्रण भएन । बरु ओली सरकारले जनतालाइ मल्ूयबृद्धि र मंहगी उपहार दिएको अनुभूति आम जनताले गरेका छन् ।